Ihe kpatara ịhọrọ anyị - Jiangsu Huida Medical Equipment Co., Ltd.
Huida Medical China, guzosie ike na August.2003, nwere 3 nnukwu-scald ọkachamara factory, nrụpụta microscope slides, cover iko, plastic lab wares na iko lab wares.With ọkọlọtọ ulo oru, ọcha ụlọ, e mere dị ka National Industry Iwu nke Medical Instruments chọrọ. .
Ụlọ ọrụ anyị agafeela ISO9001 ISO13485, CE na FDA asambodo.95% nke mmepụta na-ebupụ na USA, Canada, European Union, Latin America, Middle East, wdg.
Huida Medical China, nke ahịa na-eduzi, na-adị ndụ na ndabere nke mma, na-etolite na sayensị na teknụzụ, na-achọ ịnye mma na ọrụ kachasị mma, na-aghọ ndị mmekọ kachasị ntụkwasị obi nye ndị ahịa niile.
------- 18+ afọ ahụmahụ ụlọ ọrụ
Ihe kpatara ịhọrọ ọgwụ Huida
Ụlọ ọrụ anyị agafeelaISO9001 ISO 13485,CE naFDAcertification.95% nke mmepụta na-exported na USA, Canada, European Union, Latin American, Middle East, etc.Anyị na-adị ndụ na ndabere nke àgwà, na-amalite na sayensị na nkà na ụzụ, na-achọsi inye kacha mma àgwà na ọrụ, na-aghọ ndị kasị mma. kacha ntụkwasị obi mmekọ niile ahịa.
ihe karịrị afọ 18 nke ahụmahụ ụlọ ọrụ
square mita nke otu narị puku ọkwa nke ime ụlọ ọcha